Umbuso-dolophu, ukhululekile kwiindawo eziliqithi ezili-12 zaseLwandle lwaseChina, awunayo imfihlakalo eyadlulayo. Ayifumani imbali ebalulekileyo yobugcisa, iimfazwe zamajoni kunye neemfihlo zezinto zakudala. Kodwa oku akukona umkhonto we "ngonyama" kwisixeko. ISingapore yakwazi ukuguqula imboni yezoononophelo zanamhlanje ukuba ibe yinkcubeko, iyenze ibe yinto ekhethekileyo yefilosofi yase-Asia. I-Quay Clarke Key - umzekelo ocacileyo walo. Inhlonipho kwaye ngexesha elifanayo laseMpumalanga, indawo enemibala eneendawo ezininzi zokutya zokutya zelizwe, ii-nightclub, iindawo zokubheka, ama-boutiques kunye nokukhanga okugqithisileyo uG-Max Reverse Bungy lukhetho oluhle kakhulu lokuhamba kwindwendwe.
UClakeke Quay - ugxininiso lokuzonwabisa olungalibalekiyo eSingapore
I-Marina Bay Sands i-Sky Park yinkimbinkimbi ekhethekileyo yeziimangaliso kwiindwendwe ezixhasayo zeRiphabliki. Ikratshi leziko eliphakathi kwamanqanaba amaninzi lilamanzi angaphantsi kwamanzi kunye neengingqi ze-Jacuzzi, ukudala ukungafihli kwexesha elingenamkhawulo, ukuxhuma ngokungaxhamli kwi-panorama yesixeko.
Ubungakanani bendawo yamatshini ye-Sky Park liyikhulu elinamanci mahlanu
I-Marina Bay: Igadi yase-tropical ephahleni lwezinto ezinzima
ISingapore iyidolophu enokuzifumana ngokumangalisayo. I-Oceanarium yayo eyimfihlakalo, isondo elimangalisayo laseFerris, umthombo oyingqayizivele woTyebi, itempile evuthayo yaseSriamamman, inqaba yeMerlion kunye neepaki ezidumileyo - isilwanyana iMandai kunye neJurong ye-ornitology - iza kukhunjulwa ngonaphakade kuba ngubani na ozama ukufumana umhlaba we-Asia.
I-Singapore Zoo yiyona kuphela ehlabathini apho izilwanyana zigcinwa kwiimeko zendalo
I-Jurong Park kunye neenkalo ezilishumi elinesithandathu zeengingqi zi-380 ezinqabileyo ezivela eYurophu, eMelika, kwi-mpuma ye-Asia ne-Afrika
Ukuphakama kwesondo likaFerris, eliseMarca Bay, li-165 metres
Umthombo wobutyebi: umthombo omkhulu emhlabeni, owenziwe ngokuhambelana nemigaqo yeFeng Shui
I-Sri Mariamman itempile yodadekazi ongumHindu uMariamman, onika abantu impilo kunye nentlalo-ntle
Inqaba yaseMerlion - isidalwa sesiganeko kunye nesitye seentlanzi nentloko yengonyama - isimboli saseSingapore
Kuphi iholide engabizi kakhulu ngaphandle
Indlela yokuphumla eKairo
Isibikezelo sezulu seSt. Petersburg ngo-Ephreli 2017 kwiziko le-Hydrometeorological Centre
"Abahlaseli behlathi" baphuma kwiidyarki baye kwi-screen enkulu
IsiTshayina sithandana ne-horoscope ngo-2010
UHenna - iinwele zendalo
Imithetho yokuphumelela intliziyo yendoda yamaphupha akho
Inkukhu ethosiweyo kwisiJapan
Iifatata ezifihliweyo kunye nesiliva esidliwayo